February 2018 – AsiaApps
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ Xiaomi Mi 7
February 28, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ Xiaomi Mi 7
Xiaomi ရဲ့ ၂၀၁၈ Flagship handset ဖြစ်တဲ့ Mi7နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကောလဟာလတွေကပြီးခဲ့တဲ့လ ကတည်းကထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Display ပိုင်း၊ စျေးနှုန်းပိုင်း၊ ထွက်ရှိမယ့်အချိန်စသည်ဖြင့်သတင်းအစုံကိုထွက်ရှိနေတာပါ။ အခုလည်းကောလဟာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi7မှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာထပ်မံထွက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။…
February 28, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on မြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S9+
Samsung ရဲ့နောက်ဆုံး flagship handset ဖြစ်တဲ့ Galaxy S9+ ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကြိုတင်အော်ဒါမှာယူနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ MWC မှာ Samsung Galaxy S9…
February 27, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S9 ဟာ Galaxy S8 တုန်းကထက်ပိုမိုရောင်းချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Samsung!
Samsung ရဲ့နောက်ဆုံး Flagship handset ဖြစ်တဲ့ Galaxy S9 ဟာတော့ MWC 2018 မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မတ်လအတွင်းမှာပဲ ဝယ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လမှာစတင်ရောင်းချတော့မယ့် Samsung Galaxy S9 အတွက်ရောင်းအားကို Samsung ရဲ့…
Galaxy S9 ရဲ့နောက်ပိုင်းထွက်ရှိမယ့် Galaxy X ဟာ ခေါက်/ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်နိုင်
February 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S9 ရဲ့နောက်ပိုင်းထွက်ရှိမယ့် Galaxy X ဟာ ခေါက်/ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်နိုင်
Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံး Flagships ဖြစ်တဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့အပြီး နောက်ပိုင်းမှာထွက်ရှိမယ့် Galaxy X ဟာတော့ ခေါက်/ဖြန့် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ MWC မှာ…
တရားဝင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့ရဲ့ တီဗီကြော်ညာ
February 26, 2018 February 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on တရားဝင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့ရဲ့ တီဗီကြော်ညာ
Samsung ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့အတွက် တီဗီကြော်ညာကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ကပဲ Samsung youTube channel ကနေတဆင့်တရားဝင်ချပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Galaxy S9 တီဗီကြော်ညာကို…
မြောက်အမေရိကန်မှာ 5T Lava Red Edition ကိုတစ်လုံးမကျန်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus!
February 23, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on မြောက်အမေရိကန်မှာ 5T Lava Red Edition ကိုတစ်လုံးမကျန်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus!
OnePlus အနေနဲ့သူ့ရဲ့ 5T Lava Red Edition ကိုတော့ North America, Europe နဲ့ Asia-Pacific တို့မှာရှိတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာအဓိကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပြီး North Ameria မှာတော့ တစ်လုံးမှမကျန်တဲ့အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ OnePlus…
သင့်ရဲ့ အိမ်လေးကို နေချင်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံအလှဆင်နိုင်အောင် အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တဲ့ Houzz Interior Design Ideas
February 23, 2018 February 23, 2018 MoonReviewsNo Comment on သင့်ရဲ့ အိမ်လေးကို နေချင်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံအလှဆင်နိုင်အောင် အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တဲ့ Houzz Interior Design Ideas
ငယ်ငယ် တုန်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက် လက္ခဏာနဲ့ သေသေသပ်သပ် နေထိုင်တတ်လား ၊ မနေတတ်ဘူးလားဆိုတာ သိချင်ရင် သူ့နေတဲ့ အိမ်ကို သွားလည်ပါဆိုတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ ပြောဖူးတဲ့ စကားကိုကြားဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားကို အခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ဟုတ်ပါတယ်…
February 23, 2018 February 23, 2018 WilliamFeaturesNo Comment on MWC 2018 မှာမိတ်ဆက်ဖို့မျှော်လင့်ထားလို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်အချို့
ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံး စမတ်ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MWC (Mobile World Congress) 2018 ကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းနားဆုံးပွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း မိမိရဲ့ ဖုန်းအသစ်စက်စက်၊ နည်းပညာအသစ်စက်စက်လေးတွေကို တစ်ဉီးနဲ့ တစ်ဉီးအပြိုင်အဆိုင် မိတ်ဆက်ချင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ…